Etu esi achọ Debian, Ubuntu, Linux Mint na ihe eji emepụta ihe na Stacer | Site na Linux
Etu esi achọ Debian, Ubuntu, Linux Mint na ihe eji emepụta ihe na Stacer
Na-ebuli elu, dị ọcha ma jiri anya nke uche hụ arụmọrụ na ojiji nke akụrụngwa anyị, bụ otu n'ime ọrụ ndị ahụ anyị niile na-eme mgbe niile, ndị na-ahọrọ iji eserese eserese wee wepụta njikwa iji rụọ ọrụ a, ị nwere ọtụtụ ndị ọzọ, otu n'ime ha bụ Stacer.
N'isiokwu a ị ga-amụta otú Otu esi achota Debian, Ubuntu, Linux Mint na ndi ozo, ngwa ngwa na nghọta, ị ga-ejikwa ngwa ndị na-amalite na sistemụ arụmọrụ gị, ị ga-enwe ike ịhọrọ ngwa ndị ịchọrọ ịga n'ihu arụnyere.
1 Gịnị bụ Stacer?
2 Atụmatụ Stacer
2.1 Ihuenyo screenshots
2.1.1 Nbanye Sudo
2.1.3 Ihe nhicha sistem
2.1.4 Ngwa Ngwa
3 Etu esi etinye Stacer?
3.1 Wụnye Stacer na Debian Linux x86 na nkwekọrịta
3.2 Wụnye Stacer na Debian Linux x64 na nkwekọrịta
3.3 Iwepụ Stacer
Gịnị bụ Stacer?
Stacer bụ ihe dị mfe na-emeghe iyi ngwá ọrụ, mere site Oguzhan Inan, nke na-enye anyị ohere ileba anya na njirimara akụrụngwa anyị, bulie ma hichaa nkesa anyị, hazie ma nyochaa ọrụ na mmemme ndị na-agba ọsọ, yana inwe ikike iwepu nchịkọta anyị na-egosi.
Stacer Ọ nwere usoro dị mfe, nke a haziri ahazi na nke mara mma, nke akwadoro maka ndị ọrụ mbido na ndị chọrọ ịme usoro nke anyị na-emekarị site na njikwa site na interface eserese mara mma.
Ọ bụ a Free na Free ngwá ọrụ.
Kensinammuo na mma interface.
Nye ohere nnweta sudo.
O nwere Dashboard nke n’egosi ojiji nke CPU, Memory, Disk ya na ozi izugbe nke ngwa ayi na sistemu eji aru oru.
Ohere ka i scanomi ma hichaa faịlụ site na Apt Caché, Crash Reports, Logs System, App Caché.
Ọ na - enye gị ohere ịhọrọ ngwa na ọrụ ị ga - arụ mgbe sistemụ arụmọrụ gị malitere.
Ọ na-enye anyị arụmọrụ iji rụọ ọrụ na deactivate ọrụ ngwa ngwa na mfe.
Onwem na-magburu onwe onye-pịa ngwugwu uninstaller.
Ihe nhicha sistem
Etu esi etinye Stacer?
Wụnye Stacer na Debian Linux x86 na nkwekọrịta
download stacer_1.0.0_i386.deb site na Stacer weputara ibe. Nyochaa na ị wụnye ọhụrụ version
Na-agba ọsọ sudo dpkg --install stacer_1.0.0_i386.deb na ndekọ na ebe ibudatara ngwugwu ahụ.
Gaa na ndekọ cd/usr/share/stacer/ ma gbaba ./Stacer
Wụnye Stacer na Debian Linux x64 na nkwekọrịta
Budata stacer_1.0.0_amd64.deb site Stacer weputara ibe. Nyochaa na ị wụnye ọhụrụ version.
Na-agba ọsọ sudo dpkg --install stacer_1.0.0_amd64.deb na ndekọ na ebe ibudatara ngwugwu ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ngwa na menu nke nkesa gị, ị ga-emerịrị otu faịlụ .desktopen /home/$USER/.local/share/applications ịtụkwasị ndị na-esonụ (gbanwee ndekọ maka nke kwekọrọ na ya):
Stacer Ọ bụ a pụtara bara uru ngwá ọrụ, mfe iji wụnye, na onye kensinammuo interface na-agụnye ọtụtụ atụmatụ na anyị niile chọrọ iji na ụfọdụ ebe. Anyị na-atụ anya na ị ga-ahụ na ọ bara uru ma anyị na-echere echiche gị na echiche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi achọ Debian, Ubuntu, Linux Mint na ihe eji emepụta ihe na Stacer
Echere m na anyị ji "otu." E wezụga ntuziaka nwụnye / iwepụ, ọtụtụ nseta ihuenyo mana obere ọdịnaya gbasara ihe ị ga - eme, dịka ọrụ ndị gbanyụọ na nhazi ụlọ ọrụ iji "bulie" sistemụ ahụ.
M ga-ahapụrụ gị otu isiokwu ederede blog nwere ike inyere gị aka nke ọma
N'otu ụzọ ma ọ bụrụ na ị gaa na njikọ ndị a https://blog.desdelinux.net/?s=optimizar ị ga-enweta ọtụtụ ozi gbasara ya. Ngwaọrụ a na - enye gị ohere ịme usoro dị iche iche na eserese
Ekele m, m hapụrụ gị obere ndụmọdụ:
Zere ịmepụta post na ụdị ọdịnaya na-enweghị nghọta na nke na-enweghị isi. Ọtụtụ nde posts nke ụdị a adịworị, ebe Linux bụ saịtị nrụtụ aka maka ọtụtụ ndị ọrụ Linux, enwere ọtụtụ ihe na ibe a enwere ike iji maka nke a, ọ ka mma ka ị mee ka ha dị na ndepụta ngwa ngwa karịa ịmalitegharị wiil.
by @ onyebuchi
Zaghachi Yukiteru Amano
Ọ dị obere na ị na-ewere ya na ọ baghị oke uru, mgbe ọtụtụ mmadụ malitere iji ya n'ihi na ọ na - eme ka ọ dịkwuo mfe ma nwee nkasi obi ịnwe mkpirisi iji mee ihe ụfọdụ na ọnụ. Daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ gị, agbanyeghị na anyị anaghị emegharị wiil ahụ, anyị na-ewebata ngwaọrụ ndị ga - enyere gị aka ịme ihe ụfọdụ na Linux.
Ndepụta ahụ adịlarị, ugbu a anyị na-agbakwunye ma na-eme ka ngwaọrụ ọhụrụ mara.
Egburu m oge m, ọ nweghị ihe ọ bụla enweghị ike iji aka gị mee
N'ezie ọ bụ ihe enwere ike iji aka rụọ naanị, ana m eme ka ọ pụta ìhè na mmalite nke isiokwu ahụ
Stacer nwere interface dị mfe, nke a haziri ahazi na nke mara mma, nke akwadoro maka ndị ọrụ mbido na ndị chọrọ ịme usoro anyị na-emekarị site na njikwa site na interface eserese mara mma.
"Dị "onye amamihe" nke na-ekwu na ya maara ọtụtụ ihe n'ihi na a na-amụta ọtụtụ iwu mgbe anyị nwere nhọrọ nke ịme ihe niile n'ụzọ dị mfe. You pụrụ ịhụ na maka ụfọdụ, Mgbakọ ga-anọgide na otu dị ka na 80s.
Daalụ maka Stacer a, ọ bara uru maka anyị bụ ndị na-enweghị oge iji mụta iwu na akụkọ na-ahọrọ iji oge anyị na ihe ndị ọzọ.
Enwere ekele maka ozi ahụ!.
Daalụ nke ukwuu maka ịhapụ echiche gị.
Ndewo, ezigbo ngwa ọrụ, n'agbanyeghị, kedu ka ụmụ okorobịa ndị ahụ si aza dị ka ịchọ ịkatọ ọrụ gị yana n'enyeghị ihe ọ bụla ma ọlị. Ekwuru m, ngwá ọrụ dị ukwuu na isiokwu dị mma.
Ọ bụ ihe nkịtị, enwere puku kwuru puku, mana dị ka ihe niile na ndụ, a ga-emerịrị ihe maka ndị ji ha kpọrọ ihe, ndị ọzọ anyị ga-enwerịrị ihe dị mkpa, ndị wepụtara oge ịkatọ anyị.
Na Linux ọ dịghị nke a dị mkpa, ịkwesighi ịkwalite ihe ọ bụla, ma ọ bụ hichaa ihe ọ bụla, ọ bụghị site na njikwa ma ọ bụ na eserese eserese, Linux ga-aga mgbe niile.
Nke gi di na ezi obi, obu ihe a n’enweghi obi abua, mana odi nwute, odighi OS obula n’enweghi “nmehie”, obu ezie na anyi aghaghi ichoputa OS kachasi nma anyi maka ezigbo aru ike ya na obere nlekọta ogwu o choro.
E nwere klaasị abụọ nke ndị mmadụ, ndị na-anwa n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ iji nyere ndị ọzọ aka, na ndị na-akatọ nke mbụ mgbe niile. Anyị niile abụghị Linux guru. Maka anyị bụ ndị bidoro na ụwa a, ndị a bụ akụkọ anyị chọrọ ịnụ mgbe niile, dịka okwu nke ubutnu na-ekwu, "Linux maka mmadụ." Enwere ekele maka ozi
Daalụ nke ukwuu, enwere m olile anya na m ga-abụ ụdị onye na-enyere ndị ọzọ aka 🙂
Ezi ederede, abụ m otu n'ime ndị na-ahọrọ ịghara iji njikwa ahụ, ọ bụ ezie na m ghọtara etu o si baa uru, achọrọ m eserese eserese na amaghị m ọrụ ndị a.
Ihe bara uru nke ihe nkasi obi na-enye anyị dị oke mkpa, mana maka onye ọ bụla ọ bụ ihe nzuzo na enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-ahọrọ ime ihe karịa na n'ụzọ dị mfe, otu ndị ahụ na-anọchite anya nnukwu% nke ndị ọrụ sistemụ Ọrụ Desktọpụ ma anyị kwesịrị ịmatakwu ha.
Nweta Mfe dijo
Ezigbo isiokwu. Ngwa njikarịcha dị ezigbo mma. Aga m anwale ya na Linux Mint.
Zaghachi iji gbakee
M nwalere ya na Linux MInt
Achọpụtara m myirịta dị ka tweak ubuntu ma ọ bụ bleachbit.
Ee, ma eleghị anya, ọrụ ahụ bụ otu ihe na ụfọdụ ... Ọ na-amasị m ịchọta ọfụma nke Stacer
Ọfọn, enwere m ekele maka mmemme GUI ndị a na ndị na-ewetara anyị ya. A na m erute okpu nke mmanu di ike nke na-enye nsogbu na ewepu mmemme na GUI. Chei, ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na ha, ejikwala ha wee kwụsị inye nsogbu.
Daalụ nke ukwuu maka okwu gị, LInux bụ maka ihe ụtọ na agba niile.
Ọfọn, ka anyị hụ mgbe ndị ọkụ-GUI firecrackers ahụ chọpụtara ma hapụ anyị naanị "ụtọ na agba" anyị. Ha na-akpa àgwà dị ka a ga-asị na mmadụ manyere ha iyi ha!
N'ehihie, agbalịrị m ịwụnye ya na Ubuntu 16.04 mana o doro anya na ọ naghị, m mere ya site na njikwa na site na ngwanrọ ngwanrọ, mana ọ naghị arụ ọrụ:
Na-akwado itopusi stacer_1.0.0_amd64.deb…
Ighapu stacer (1.0.0-1) n'elu (1.0.0-1) ...
Tọ ntọala (1.0.0-1) ...
Nhazi usoro maka bamfdaemon (0.5.3 ~ bzr0 + 16.04.20160824-0ubuntu1) ...
Nhazi na-akpali maka gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
Nhazi ihe na-eweta maka desktọọpụ-faịlụ-utils (0.22-1ubuntu5) ...
Ihe nhazi maka mime-nkwado (3.59ubuntu1) ...
stacer: iwu ahụghị
Gaa na cd / usr / share / stacer / directory wee gbaa ọsọ ./Stacer ... Ma ọ bụ sọ dee ihe ndị a na ọdụ /usr/share/stacer/./Stacer
N'ihe m, folda / usr / share / stacer apụtaghị, m chọkwara ya n'aka na nemo na ihe ọ bụla.
Ndewo @ HO2Gi ị nwere ike ịgwa m kesaa nkesa na ụdị ị na-etinye iji hụ ma m ga - emeghachi ọnọdụ ahụ ..
Luigys: Daalụ maka iweta ntakịrị ọkụ iji bulie sistemụ arụmọrụ anyị.
Ana m echeta otu ahịrịokwu sitere n'aka Onyeozi anyị, José Martí, nke na-ekwu ma ọ bụ obere:
«Anyanwụ, eze kpakpando anyị, nwere ntụpọ. Ezughi oke. Ndị na-ekele ekele na-ahụ ìhè. Ndị na-enweghị ekele na-ahụ ntụpọ.
Ma lee ka o siri sie ike ịhụ ntụpọ ndị dị n’anyanwụ ma ọ bụrụ na i lee ya anya!
Kedu otu ahịrịokwu kwuru ya nke ọma:
"Ka nkịta dọọ Sancho enyi, ọ bụ ihe ịrịba ama na anyị na-agafe."
Banyere. M ebudatara ya mana m wụnye ya na onye nrụnye nke na-abịa maka ngwugwu DEB, ọ dị mma, mana achọrọ m ịgba ọsọ ma enwere m njehie
Ana m ahapụrụ gị onyogho a, ana m ekele gị n'ọdịnihu maka enyemaka
Na-agba ya si console na-eso ụzọ na-agwa m otú ọ na-aga:
Ọ ga-abụrịrị ihe na-adịghị mma na ụzọ mkpirisi. Nwere ike ịnwale ịmepụta ihe ọhụrụ site na ihe ndezi ederede gị dị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ya, lee koodu a:
Aha = Stacer
Terminal = ụgha
Ụdị = Ngwa
Na mpaghara "Icon" ị nwere ike igosipụta ụzọ na akara ngosi ọ bụla ịchọrọ (dịka ọmụmaatụ /home/jesus/cepillo.png).
Ihe ọzọ: Echefuru m na ị ga-echekwa faịlụ ahụ na ndọtị .desktop ozugbo ị mechara dezie ya.
Daalụ maka ozi ahụ, ekele ọ bụla maka ndị ọrụ bụ isi nwere ekele dị ukwuu, ekele
Ọ na-agwa m na enwere ntụkwasị obi nke enweghị ike mejupụta ya mere m na-anwa iwepụ ya mana ọ bụ ihe ijuanya na achọtara m ya ma mepee ya ma enwere ike iji ya ... Amaghị m ma ozi ahụ ọ bụ ihe nkịtị ma ọ bụ ihe Eji m Xubuntu 16.04.
Ekele m na ekele maka imere ndị anyị bịara ọhụrụ na GNU / Linux ihe ọma iji mee ka ndụ dịrị anyị mfe (n'ihi na enwere m obi abụọ itinye nnukwu oge na GNU / Linux iji bụrụ ọkachamara na ya) Achọpụtara m n'eziokwu na ndị ọrụ Linux chọrọ ịmata na Windows na-akwado ahịa pc, mana akparamagwa nke ndị nkatọ gị bụ ka ị ghara ikwe ka onye ọzọ banye ... nke ahụ ekweghị.
Nnọọ! Na-akpali nnọọ mmasị!
Ọ ga-amasị m ịmata ma ngwa a na-arụ ọrụ naanị maka Ubuntu na nkwekọrịta ma ọ bụ maka nkesa ndị ọzọ.
Iwu Virsh - Netwọk Kọmputa maka SMEs
CentOS na netwọ kọmputa maka SMEs